Så funkar vården i sthlm-somaliska - 1177 Vårdguiden
Hitta rätt vård nära dig - somaliska
Daryeelka caafimaadka gobalka Stockholm
Hitta rätt vård nära dig - somaliskaThe content concerns Stockholms län
Markaad adiga ama qof ka tirsan qoyskaadu uu xannuunsado, waxaa mar walba jira daryeel caafimaad kuu dhow. Tusaale ahaan Närakuten ayaa wax ka qabta dhaawaca iyo cudurada hore ugu baahnaan jiray booqashada cisbitaalka qeybta degdega. Laakin waxa jira siyaabo kala duwan oo loo heli karo daryeel caaafimaad. Halkan ayaad ka aqrisan kartaa wax intaa dheer oo ku saabsan goobaha kale ee daryeelka caafimaad ee jira iyo halka aad gargaar ka heli karto. Daryeelka caafimaad aad u baahan tahay ayaa ku xiran inta uu la eg yahay dhaawaca ama xannuunka aad qabto. Mararka qaar baad u baahan kartaa daryeel caafimaad iyo daweynta dhaawaca iyo cudurada halista ah. Mararka qaarna adigaa guriga isku daweyn kara markaad kalkaalisada caafimaad ka hesho talo la xiriirta is daweynta. Shaqaale takhasusa ayaa jooga dhammaan qaabilaadaha daryeelka caafimaadka.
Haddii aadan ogeyn nooca uu yahay daryeelka caafimaad aad u baahan tahay, wac markaa 1177. Haddii aad ku jirto xaalad degdega oo aad u baahan tahay daryeel degdega, wac markaa 112.
Wac 1177 si aad u hesho tala siin daryeel caafimaad
Waxaad wici kartaa 1177 adigoo la hadlaya kalkaaliso caafimaad, taasoo kaa tala siin karta cudurada iyo caafimaadka. Waxay kalkaalisada caafimaad mararka qaar kuu sheegi kartaa sida aad adigu ku daweyn laheyd xaaladda aad ku jirto. Kalkaalisada caafimaad ayaa sidoo kale kaa waacin karta sidi aad ku heli lahayd daryeelka saxda ee caafimaad kuuna dhow haddii aad u baahato.
Halkan ka aqriso wax intaa dheer oo ku qoran af iswiidhish.
La xiriir rugta caafimaadka
Rugta caafimaadka waa qaabilaadda kuugu dhow markaad u baahato inaad la kulanto dhakhtar ama kalkaaliso. Gobalka Stockholm waxaa ka jira 200 rug caafimaad oo takhasus u leh cudurrada caadiga ah.
Waxaad tagi kartaa rugta daryeelka caafimaadka haddii aad tusaale ahaan isku aragto:
Finanka maqaarka ama infekshanka maqaarka
Furan: Caadi ahaan isniin–Jimco 08.00–17.00 (qaar baa fiidki furan)
Halkan ayaad ka heleysaa rugta caafimaad ee kugu dhow (iswiidhish).
Booqasho guri ee gawaarida dhaqtarka heeganka
Gawaarida dhaqtarka heeganka ayaa la helaa fiidkii, habeenkii iyo maalmaha fasaxa kuwaasoo loogu tala galay dadka u baahan daryeel caafimaad ee degdega, laakin ay dhib ku tahay inay tagaan qaabilaadda daryeelka caafimaadka. Waca 1177 si aad ula hadasho kalkaaliso caafimaad si loo qiimeeyo haddii aad u baahan tahay inuu guriga kugu soo booqdo gaariga dhaqtarka heeganka.
BUMM – barn- och ungdomsmedicinska mottagningar
Qaabilaadda caafimaadka carruurta iyo dhallinyarada waxaa loogu yeeraa BUMM. Waxaa halkan jooga dhakhaatiirta carruurta iyo kalkaaliyayaasha carruurta. Carruurta da'doodu tahay ilaa iyo 1 sano ayuu dhakhtarka carruurtu baari karaa isla maalinta ay balanta qabsadaan. Waxaa gobalka ka jira 40 xarumo ee BUMM.
Furan: Isniin - Jimco 08.00-17.00
Daryeelka degdega ee kuu dhow (Närakuter)
Närakuten waxaa loogu talagalay dhaawacyada iyo cudurrada u baahan in isla markaa wax laga qabto. Waxaad heli kartaa gaadiid ambalaaska ama adigaa tegi kara Närakuten. Waxaad halkaa ka heli kartaa caawimaad badan sida dhaawacyada iyo cudurrada ay horey kaaga caawiyeen qaabilaadda gurmadka ee isbitaalka.
Waxaad daryeelka degdega ee ku dhow tegi kartaa haddii aad adiga ama ilmahaagu isku aragtaan tusaale ahaan:
Dhibaatooyinka xasaasiyadda daran,
Dhaawacyada nabaro daran
Haddii aad ka shakiso inaad gacan ama lug ka jabtay.
Haddii aad ka shakiso inuu xinjiroobay dhiiga lugta
Dhammaan Närakuten waxaad ka heleysaa:
Qalab raajo iyo sheybaaro wax lagu baaro.
Shaqaale takhasusa oo daweeya carruurta, dadka qaan gaarka iyo waayeelka.
Närakuten wuxuu qaabilaa carruurta laga bilaabo 0 sano.
Furan: maalin kasta 08.00–22.00
Qaabilaadda deg-dega ee cisbitaalada
Qaabilaadda deg-dega ee cisbitaalada waxaa loogu tala galay dadka qaangaarka ah ee qaba cudurro iyo dhaawacyo aad u daran. Qaabilaadda deg-dega ayaa furan 24-ka saac. Waxaad goobahaa tagi kartaa kartaa haddii aad isku aragto, tusaale ahaa:
Xanuun laabta ah
Neefsashada oo kugu adag
Qaabilaadda deg-dega waxay mudnaanta koowaad siisaa dadka qaba xannuunka ugu daran. Waxaa laga yaabaa inaad muddo dheer sugto haddii aanad si daran u xanuunsaneyn. Mararka qaarkood waxaa laguu diri karaa cisbitaal kale haddii aad halkaas ka heli karto daryeel fiican.
Wac mar kasta 112 haddii aad u aragto inay xaaladdaada caafimaad tahay mid nolosha halis ku ah.
Daryeelka deg-dega ah ee cisbitaalka caruurta
Daryeelka deg-dega ah ee cisbitaalka caruurta waxaa loogu tala galay carruurta iyo dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 0-17 sano oo qaba cudurro halis ah ama u baahan daryeel degedeg ah.
Carruurta ayaa la geyn karaa daryeelka degdega haddii ay tusaale ahaan qabaan:
Wac mar kasta 1177 inta aadan la xiriirin daryeelka deg-dega ah ee carruurta.
Khidmadaha daryeelka caafimaadka
Carruurta 0–17 sano: waa lacag la'aan, marka laga reebo daryeelka deg-dega ah ee caruurta oo ah 120 karoon.
Qaan gaarka da’doodu u dhaxeyso 18-84 sano:
Rugta caafimaadka: 200 kronor
Daryeelka degdega ee kuu dhow: 200 kronor
Qaabilaadda deg-dega ee cisbitaalada: 400 kronor
Qaan gaarka ka weyn 85+ sano: lacag la’aan
Waa inaad lacag bixisaa haddii aad ka baaqato ballan aad qabsatay ee daryeel
Ha iloobin inaad waqti hore ku wargeliso qaabilaadda haddii aadan iman karin ballanta kuu qorsheysneyd. Laga bilaabo 1-da sebteember 2020 waxaad bixineysaa 400 karoon haddii aad ka baaqato ballan daryeel haddii aysan jirin sabab la oggol yahay.
Halkan ka aqriso wax intaa dheer oo ku saabsan khidmada goobaha daryeelka caafimaadka (iswiidhish).
Adeegyada internetka (E-tjänster) oo ku qoran iswiidhish
Waxaad 1177 hagaha caafimaad adeegga elektarooniga (e-tjänster) ka akhrisan kartaa faylalkaada caafimaad isla markaana ka dalban kartaa qalabka caawinta aad u baahan tahay. Sidoo kale ballan ayaad ka qabsan kartaa iyo inaad dib u cusboonisiiso warqadda daawada dakhtarku kuu qoray oo internetka aad u mareyso. Faylalkaada caafimaadka waxa ku qoran sida warbixinta daryeelka iyo daweynta aad heshay. Adeegga elegtarooniga ee 1177 ayaa ku baxa afka iswiidhishka oo keliya.
Ku gal aqoonsigaada elegtarooniga ah.